moto e5 kutamba uye e5 pamwe ongororo
Kuru Nhau & Ongororo Moto E5 Play uye E5 Plus Ongororo
Moto E5 Play uye E5 Plus Ongororo
Moto E akateedzana adzoka muchizvarwa chechishanu, achivimbisa kukosha kwakakwira mumutengo uye mashandiro ayo anoratidza kushomeka kushoma. Iyo yekupinda-chikamu Moto E5 Play inotengesa kwakatenderedza $ 70 nebasa rakabhadharwa, asi inogona kuitirwa mahara kana iwe ukachinjisa nhamba yako kuCricket. Iyo Moto E5 Plus inokwanisa zvishoma inogona kutengwa nemari inosvika madhora zana nemakumi masere. Asi idzi nhare mbiri dzichakwanisa kutifadza nechimwe chinhu chinopfuura mutengo wavo, uye ndedzipi dzimwe nzira pane aya maviri emitengo? Ngatinyurirei mukati uye tizive.
Moto E5 Tamba / Moto E5 Uyezve
Micro-USB tambo ine 10W inokurumidza kuchaja adapta (Moto E5 Play)
Micro-USB tambo ine 15W TurboPower adapta (Moto E5 Plus)
Warranty uye zvinyorwa zvemabhuku
Moto E5 Uyezve
Iyo Moto E5 Play inotaridzika uye inonzwa senge yakajairwa yakachipa-inodhura, yekupinda-chikamu nhare - ine musana unobviswa wakagadzirwa nepurasitiki yakagadzirwa uye kuratidzwa kwakakomberedzwa neakakurumbira bezels. Kutaridzika kwaro kuri kure nekutyisa, asi mativi akakombama nemakona anoita kuti ruoko ruve naka mune ruoko.
Zvichakadaro, iyo Moto E5 Plus inokwereta mashoma emhando dhizaini dhizaini inoita kuti itaridzike inotonhorera, kusanganisira girazi kumashure uye rakareba, 18: 9 inoratidzira ine slimmed-pasi bezels. Icho chiri padivi rinorema, zvakadaro, nepo girazi richidzoka - kunyangwe rinotaridzika-rinotaridzika nenzira yarinoratidzira mwenje - rinowanzo tenderera kukwenya.
Ose ari maviri E5 Kutamba uye E5 Plus mutambo iyo poker-chip-senge protrusion iyo inotenderedza yavo optics, uye ese ari maviri ane yakasimba kunzwa kune simba uye vhoriyamu mabhatani; isu & rsquo; tinofara kuona chiitiko chisingachinjiki ipapo. Ose maviri zvakare ane zvigunwe zvigunwe kumashure uye zvine mvura-yekudzinga - chinhu chinogona kubatsira angangoita vamwe vane zvidiki zvinoputika, asi hazviite kuti nhare dzinyurwe mumvura.
Moto E5 Tamba (pamusoro), Moto E5 Play (pasi)
Iyo Moto E5 Play uye E5 Plus & rsquo; s inoratidzira haizokundikana & rsquo; kuva iyo inonyanya kufadza iwe & rsquo; iwe waona. Pa 5.2 inches uye 6 inches zvakateerana, iyo E5 Play inogadzira 282 ppi ine HD resolution (720 x 1280) nepo iyo E5 Plus inopinda pa268 ppi iine HD + resolution ye 720 x 1440. Nemamwe mazwi, haina kukunda & rsquo; usaome. kuona pixelization pane imwe yemidziyo iyi, asi iyo Plus inoita kunge yakajeka.
Zvakangodaro, izvi zvidzitiro zvinoita kuti basa riitwe munzvimbo zhinji dzemwenje. Inokwanisa kudarika mazana mashanu nemakumi mashanu enits, iyo E5 Plus haizokupe chero dambudziko muzuva rakananga. Iyo E5 Play, kune rimwe divi, inoita zvakanyanya kujeka muzuva rakananga, inongokwanisa chete kusvika mazana matatu nemakumi matatu nemazana matatu.
Panyaya yekuburitswa kwemavara, ese ari maviri anoratidzira anoratidza iwo marara ane hushoma tsika yekupenda bhuruu. Sezvineiwo, isu takawana iwo mavara paE5 Play kuti ive zvishoma zvishoma kutarisana neiyi tinting, kunyangwe iri shoma uye ine simba yakazara.
Motorola Moto E5 Tamba
(Zvakanaka) 1: 1306
Motorola Moto E5 Uye
(Kugona) 1: 1718
(Zvakanaka) 1: 1224
(Zvakanaka) 1: 1159
Kupindirana uye Kushanda
Mufananidzo:1of14Mune chaiwo Moto fashoni, iyo Moto E5 Play uye E5 Plus inomhanya yakachena, isina bloat vhezheni yeApple 8.0. Iconography, mamenu, uye yakajairika interface aesthetics don & rsquo; zvakasiyana zvakanyanya kubva pane izvo iwe & apos; d zvaunowana pane imwe Android handset, iyo inogona kubatsira kuchengetedza zvinhu zvishoma uye nimble, nepo zvakare ichinyatso tarisa kubatana uye kujairana. Izvo zvakare hazvifanire & rsquo; haikuvadze kana Android inogadziridza ikauya nekuda kwekushomeka kwekugadzirisa kunodiwa kuti ugamuchire yakadaro, asi zvinosuwisa, izvo hazviiti & rsquo; hazvivimbise kuti Android inogadziridza ichauya kune awa maviri nenzira yakakodzera.
Iyo yega yekuwedzera app mukati meiyi Android chiitiko inoenda nezita & ldquo; Moto. & Rdquo; Iyi Anwendung, zvisinei, yaita kumwe kuwedzera nekuwedzera kuita kwekuwedzera tebhu nematuru ekushandisa uye kuchengetedza bhatiri padivi peyakajairwa Moto Zviito uye Moto Ratidza, izvo zvakaramba zvakangofanana maererano neyakaiswa seti. Gore rakapera takaona kuunzwa kweMoto Ratidza & rsquo; s zvinowirirana zvechivhariro zvechivhariso, izvo zvinobvumidza vashandisi kuona nekuita zvimwe nezviziviso zvinoratidzwa pane yekukiya pamwe neyemhando yehusiku kubvisa mwenje webhuruu. Zvese zviri zviviri zvichiri kubatsira, sezvakaita nemasaini ekuvhura mwenje nemaviri anokurumidza kutema kana kamera ine kuzunza mbiri kweruoko. Zvese izvi zvinowanikwa mukati meMoto app mune yakashambidzika uye inowanikwa nyore interface.
Nehurombo, kufambisa iyo yeminwe yekunzwa kumusana kwakabvisa kuita senge idzo dzinogona kutsiva makiyi ekufamba pane iyo E4 nhepfenyuro. Kwete kurasikirwa kukuru, asi chimiro chacho chaive nevateveri vayo.
Processor, Ndangariro, uye Performance
Iyo Moto E5 Play inouya ne2 gigs ye RAM, 16 GB yekuchengetera, uye Qualcomm & rsquo; s Snapdragon 425 chip nepo iyo E5 Plus ichicherekedza izvo nekuwedzera imwe gig ye RAM, yakapetana simba rekuchengetedza, uye kusarudza iyo SD 435 pachinzvimbo. Ose ari maviri anowedzerwa kuburikidza nemakadhi e MicroSD - kusvika kune imwezve 128 GB - inova yakanaka sezvo 16 GB E5 Play inongova neanenge masere maghi anowanikwa.
Aya machipisi anowanzoitirwa kurerutsira mabasa, uye kusundira iwo mapikicha e720p pane isina kuremara Android interface inoratidza kuti iko kusanganiswa kwakanaka kwesoftware uye Hardware kunogona kununura kumhanya uye kuyerera mune mazhinji chero basa. Ko kutamba kuchave chiitiko chakanakisa pane idzi nhare? Zvirokwazvo kwete, uye kwete kufamba kwese kuburikidza neiyo OS kuchave hunyoro hwakatsetseka futi. Nekudaro, iwe wakakunda & rsquo; tmhanyira mukurembera kwakanyanya kana kusaririra pane chero nharembozha mukushandisa kwako kwese Multitasking switch inokasira, maapplication anotanga munguva, uye kazhinji zvichanetsa kune vashandisi kugadzira mamiriro apo ivo & rsquo; vachashuvira kuita zvirinani - zvakare, chengetera kumitambo, iyo inogona kuve yakaoma, asi inopfuura kuita. Kuisa nguva uye mafuremu akadonhedzwa ndiyo ichave kudzima kukuru pano.
MumbaiSeVaYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 44719 Motorola Moto E5 Uye 56592 Nokia 6 (2018) 90278 Motorola Moto G6 70490
JetStreamYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 17,867 Nokia 6 (2018) 27,887 Motorola Moto G6 22,512
GFXBench Mota Dzingirira pa-screenYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Uye 5.6 Nokia 6 (2018) 5.83 Motorola Moto G6 3.2
GFXBench Manhattan 3.1 on-screenYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 6.3 Motorola Moto E5 Uye gumi neimwe Nokia 6 (2018) 10 Motorola Moto G6 5.8
Geekbench 4 imwechete-musimbotiYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 645 Motorola Moto E5 Uye 613 Nokia 6 (2018) 876 Motorola Moto G6 750
Geekbench 4 yakawanda-musimbotiYakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 1769 Motorola Moto E5 Uye 2030 Nokia 6 (2018) 4181.5 Motorola Moto G6 3928
Pamberi pekubatanidza kumberi, iwe & rsquo; uchanyatso kuwana izvo zvinodiwa pano - hapana kuregedza kusarasa kana kuwedzera kunoshamisa. Ese ari maviri Moto E5 Plus uye E5 Play vane mbiri-bhendi Wi-Fi, Makaralı 4.2, uye 4G LTE kugona - asi hapana kuchaja kweasina waya uye hapana NFC yekubhadhara nhare. Zvakajairika kumafoni ekupinda-chikamu kusiya maviri ekupedzisira, kunyange vakwikwidzi vakaita seNokia 6.1 vane NFC.
Moto E5 Tamba
Mubazi rekamera, iwe & rsquo; uchasangana nemaviri setups akasiyana. PaMoto E5 Plus, iwe & rsquo; uchawana 12 MP snapper ine PDAF (Phase Detection Autofocus) uye Laser Autofocus ine mwenje we LED wakazara mukati mayo kamera hump. Iyo E5 Kutamba yakanyanya kusarudzika neayo asina-mapfupa, 8 MP sensor uye LED flash. Mifananidzo yakapfurwa pamafoni aya akasarudzika zvakare.
Kusvika pakuita kwemhando yemufananidzo, iyo Moto E5 Plus uye E5 Play zvine hunyanzvi hwakafanana mune zviitiko zvine simba - mapfuti achave echikamu chikuru chinopfuura, asi nezvose zviripo & maapos; maitiro ezvekuratidzira zvinouya zvakapfurikidza. Iwe & rsquo; iwe uchawana musiyano uri nani uye mamwe mavara akazara pane iyo E5 Plus & rsquo; s mafoto, pamwe neiri nani ruzivo rwekubatwa. Pakazara, mafoni ese ari maviri anotora mapikicha anoshandiswa mumamiriro ezvinhu akanaka.
Moto E5 Ridza uye E5 Plus sampuro mifananidzo
Iyo E5 Play inoratidza inowoneka zvishoma dambudziko mukutarisa kwepasi-mwenje kupfura kupfuura iyo E5 Plus, sezvinoonekwa neyakajeka blurrier shots iyo yainobata mumamiriro akadaro. Kazhinji, iwe & rsquo; uchacherechedzawo zviyo zvakawanda mumifananidzo yakaderera-yakajeka yakatorwa paE5 Play maringe neE5 Plus.
Iyo E5 Tamba mitambo ye5 MP kumberi-yakatarisana kamera ine flash, nepo iyo E5 Plus inosarudza ye8 MP & rsquo; s ine flash. MaSelfies akatorwa pane aya maviri makamera achave akafanana nepakati, asi iyo E5 Play inoita kunge inotora zvirinani uye kusadzikama zvishoma pane iyo E5 Plus, kunyange Mutambo uchiratidzira kujeka kutambudzika nekuratidzira kupfuura zvinoita Plus.
Kutora pikicha Pazasi zviri nani
Kutora HDR pikicha(sec) Pazasi zviri nani
CamSpeed ​​zvibodzwa Yakakwirira iri nani
CamSpeed ​​zvibodzwa zvine flash Yakakwirira iri nani
Vhidhiyo yekurekodha inokwira kumusoro pa1010 resolution pane ese E5 Play uye E5 Plus. Kazhinji kutaura, zvese izvi zvishandiso zvinorekodha vhidhiyo ine chaiyo yakajeka, kunyangwe iine anemic color kubereka uye neavhareji yemhando yepamusoro. Sezvazviri nekutora mifananidzo, vhidhiyo yekutora inonetseka zvishoma nekuburitsa yakajeka yakajeka zvimiro, pamwe neizvo zviri munzvimbo dzakasviba, izvo zvinoita kunge zvakare zvinobatsira kune mamwe mavara asina kukwana. Zvakaringana kutaura, kana imwe yeaya mafoni ari kuzoburitsa akanyanya kuomesa maficha akamboonekwa nenyika, asi pane mimwe misiyano inokosha pakati pezviviri.
Kazhinji zvinonyanya kuoneka ndeye Moto E5 Plus & rsquo; s software-yakavakirwa vhidhiyo kugadzikana. Izvi zvinowanzoita basa rakanaka rekudzikamisa tsoka dzako uye zvinoita musiyano mukuru mukurekodha mhando, kunyanya kana uchienzanisa iyo E5 Plus uye E5 Play. Ichi chimwe chinhu chakarasika zvakanyanya paE5 Play, kusavapo kwacho kunogadzira mavhidhiyo ari akati kwirei uye achisvetuka kunyangwe paunenge uchiedza nepese paunogona kuti uve neruoko rwakatsiga.
Moto E5 Ridza uye E5 Plus Sample Vhidhiyo
Uyezve, iyo E5 Play & rsquo; s yekurekodha odhiyo inogona kunetsa kwazvo. Nepo marekodhi mazhinji akabuda mushe, kunyangwe kurira kuri kudijitiwa, kanopfuura kamwe chete, tanga tine zviitiko apo zvakarekodhwa odhiyo mukati nekunze, kurira kwakamanikidzwa zvakanyanya uye kwakaderera-mhando mukati mese. Ndinovimba iyi haisi & rsquo; t iyo kesi pane ese Moto E5 Play mayuniti hazvo, sezvo zviitiko zvakadaro zvichakanganisa zvachose kurekodha.
Chekupedzisira, sezvakangoita mamiriro emhando yemufananidzo, iyo Moto E5 Plus inonongedza kunze zvishoma zvirinani mavara uye kuratidzwa kupfuura iyo E5 Tamba zvachose.
Kufona kwemhando yepamusoro pamaoko aya akanaka zvakanaka. Isu takange tisina nyaya dzinojekesa nechiratidzo kana kugamuchirwa, asi chinyoreso, icho chinopetwa senge speakerphone, chaigona kushandisa mashoma emamwe madecibel ekuburitsa - mune ese akajairwa uye mafoni efoni. Zvimwe kunze kweizvi, isu nekutenda hatina & rsquo; hatine zvakawanda zvekunyunyuta nezvazvo.
Ose mairi E5 Plus uye E5 Play vanoshandisa zvigadzirwa zvemakona zvakapetwa semataifoni. Ipo ivo & rsquo; vachange vakanaka kuti vatarise mavhidhiyo vari vega, iwe & rsquo; uchatambura kufadza vataridzi vazhinji neiyi demure speaker setup. Mutinhimira kubva kuvatauri kazhinji unonzwika kunge wakashata.
Mahedhifoni kuburitsa simba(Volts) Yakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 0.51 Motorola Moto E5 Uye 0.492 Nokia 6 (2018) 0.34 Motorola Moto G6 1.00
Gudzanzwi inzwi(dB) Yakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 74.3 Motorola Moto E5 Uye 78 Nokia 6 (2018) 81 Motorola Moto G6 78
Iyo Moto E5 Plus uye E5 Tamba zvese zvakachinjika mumhedzisiro inotyisa kana zvasvika kune hupenyu hwebhatiri. Iyo E5 Kutamba & rsquo; s 2,800 mAh bhatiri yakatipa mhedzisiro inogoneka mune yedu tsika bhatiri dhayera bvunzo, ichipera kubva ku100 kusvika ku0 mumaawa anopfuura masere chete.
Iyo E5 Plus ndiyo chaiyo champ pano, zvakadaro. Ichipakata hombe, 5,000 mAh bhatiri, iyo E5 Plus yakapetwa zvakapetwa kuita kweKutamba & rsquo; s mune yedu tsika bvunzo, kudhiraina kubva ku100 kusvika ku0 mumaawa anopfuura gumi nemashanu chete. Isu takakwanisa kufamba nyore nyore kuburikidza nezuva rechipiri rekushandisa neE5 Plus, nepo iyo E5 Play yaigona kunyatso chengetedza kuburikidza imwe chete.
Nezve nguva dzekuchaja, iyo Moto E5 Plus ichave inoda nguva yakawanda yekuchaja kupfuura iyo E5 Play, asi iyo Plus inosanganisira iyo TurboPower adapta iyo iyo E5 Play isingaite. Kubhadharisa iyo Plus kubva pa0 kusvika pa100 zvinotora imwe nguva kunyangwe - maawa mashanu nemaminetsi gumi nemashanu kuti ive chaiyo. Iyo E5 Play inobhadharisa kumusoro mumaawa maviri nemaminetsi gumi nemana.
Hupenyu hwebhatiri(maawa) Yakakwirira iri nani Motorola Moto E5 Tamba 8h 14 min(Avhareji) Motorola Moto E5 Uye 15h 8 min(Zvakanaka) Nokia 6 (2018) 8h 14 min(Avhareji) Motorola Moto G6 8h 25 min(Avhareji)
Kutengesa nguva(maminitsi) Pazasi zviri nani Motorola Moto E5 Tamba 134 Motorola Moto E5 Uye 315 Nokia 6 (2018) 111
Saka, mubvunzo wekupedzisira: mafoni aya anogara kupi? Kutanga, regai & rsquo; titaure nezve iyo E5 Play.
Iyo E5 Play inotengesa pamadhora makumi manomwe paVerizon Wireless uye Boost Mobile, nepo vanyoreri veCricket vachigona kuwana foni mahara. Izvi zvinoisa iyo E5 Play munzvimbo isiri yemakwikwi, sezvo mamwe madhora 70 mamirioni achanyanya kunetsa kubata nayo kupfuura iyo E5 Play munzira zhinji. Nekudaro, iyo yekukanganisa odhiyo yekurekodha mumavhidhiyo ine isu takatsamwa, kunyanya kana Mutambo uchimhanya zvakanaka uye woita kuti basa riitwe zvakakwana mune mamwe mapoka.
Kana iri iyo E5 Plus, izvo & apos; zvishoma zvekutengesa zvakanyanya. Inotengeswa pamadhora zana nemakumi masere paCricket uye $ 288 paSprint, uye mukati memutengo uyu une dzimwe nzira kubva kuNokia - iyo 6 ne6.1 iri. Kune & apos; zvakare Moto & apos; yega G6. Zvese izvi zvinopa zvakafanana zvakachena Android zviitiko, zvirinani kutaridzika, uye zvingangoita zvirinani kamera. Chikonzero chega chakasimba chekutora iyo E5 Plus pachinzvimbo ndechehwo hwakareba hupenyu hwebhatiri. Chekupedzisira, isu & & rsquo; isu hatikanganwe iyo inotyisa iPhone SE inotengesa nemari shoma kupfuura iyo E5 Plus zvakare - kana saizi neOS hazvina basa kwauri, hongu.
Yakaderera-mutengo zvishandiso zvinokupa iwe zvishoma zvezvose
Chiedza, isina-bloat-isina maficha anoita zvakawanda nezvishoma
Inoshanda vhidhiyo kugadzikana (E5 Plus)
Mazuva-akareba hupenyu hwebhatiri (E5 Plus)
Chiedza chakajeka uye chakajeka (E5 Plus)
Yakaderera pixel density pane inoratidza kuratidza pixelization nyore
Kuonekwa kwakashata kwekunze (E5 Play)
Zviya vhidhiyo kubatwa
Kurekodha odhiyo mumavhidhiyo kunogona kunge kusingabatsiri (E5 Play)
Micro-USB kuchaja panzvimbo yeazvino USB-C
7.2 Tinoyera sei?
4.5 2 Ongororo
kupi kutenga galaxy buds
imwe inobata foni metro pcs
pa & t cyber Muvhuro zvinoshanda
Maitiro ekuchinja zviri nyore maapponi eApple paApple
LG Stylo 4 kuunza yakagadziridzwa stylus chiitiko kuT-Mobile uye MetroPCS
Bhash YeRupu uye Ipo Loop Mienzaniso
Amazon ine hafu yegumi nembiri inotonhorera Ticwatch smartwatches iri kutengeswa pamadhora makuru
T-Mobile vatengi vanogona kuhwina $ 5,000 Amazon kadhi rechipo
Maitiro ekudzima anotsamwisa Akachengeteka Wi-Fi pane iyo Samsung Galaxy S10
Ndeapi maPhones achawana iOS 15?